Pirson And Spearman kuwirirana Forex chakarurama - Forex zviratidzi Download
musha MT4 zviratidzi Pirson And Spearman kuwirirana Forex chakarurama
Pirson And Spearman kuwirirana Forex chakarurama
Pirson And Spearman kuwirirana Forex chakarurama anoshanda ne correlating yakasiyana mari vaviri vaviri. The paakati iri chete kukarukureta sezvo zvinofamba avhareji. By correlating zvinoreva kuti chinoratidza zvichaita chete kupa zviratidzo imwe mari peya, kana chiratidzo ose dzimwe correlated Currency nomwe ndiro. Kana correlating mari vaviri vaviri, uchitarisa Currency vaviri kuti vave kana zvakafanana nechepasi mari kana mutengo mari. maviri aya vanowanzotevedzera kufamba nenzira iyoyo mirayiridzo
Chinhu bedzi achaonekwa pamusoro wako wokutengesera chati ndivo zvokutengeserana anonongedzera. The Pirson And Spearman kuwirirana chakarurama pachayo kunoratidzwa pamusoro penzvimbo hwindo pazasi wokutengesera chati. The Pirson And Spearman kuwirirana chakarurama ane zviviri zvinozunguzirwa misara. Mumwe spearman_correlation ndiyo dzitsanye mumwe munhu anononoka kubvongodzwa spearman_correlation. Kutsanya zvinofamba spearman_correlation munyoro pane ruvara nokuda default ukuwo anononoka kubvongodzwa spearman_correlation rakatsvuka ruvara.
chakarurama Izvi akapa dzokutengeserana mureza vatengesi. It kwete chete anonyaradza tengesa uye kutenga anonongedzera asiwo anotipa siyana apo zvavo runoenzanirana vanorega Nokurasikirwa igadzikwe.
Fig.1. The Pirson And Spearman kuwirirana chakarurama yakatakura (akaisa) pamusoro chati.
Achiisa akarayira achishandisa Pirson And Spearman kuwirirana chakarurama.
Sezvo muzvinashawo unofanira anoshivirira zvakakwana kumirira anonongedzera kuti vanowanika. Zvimwe kana ukaisa mirairo tichimhanya-mhanya, uchaona pachako kuita Nokurasikirwa. The anonongedzera ndiwo miseve anonyorwa ari kutengesa chati. chakarurama Izvi pakati zviratidzo zviri vaizotibata chaizvo panyaya rokuita purofiti. Chiratidzo kunotangira chakarurama uyu 99% akarurama uye kashoma ugadzire kurasikirwa kana ukaisa basa maererano chiratidzo chacho.
Kana kuti kuisa Utenge hurongwa: mumwe Buy kuti anoiswa apo chiratidzo chakapiwa ane mutema museve kakanongedza kumusoro. Panewo imwe museve yebhuruu kuti rinowanika panguva chinoratidza chati pazasi wokutengesera chati.
The Buy chiratidzo acharamba kuoneka apo kutsanya zvinofamba spearman_correlation chinozunguzirwa mutsetse michinjikwa (anowana pamusoro) ari kunonoka kubvongodzwa spearman_correlation. Asi haufaniri kuvimba ichi sezvo chiratidzo anopiwa panguva diki pashure kana muitiro akatsinhira.
Akariyanika hurongwa, unofanirawo isa kumisa kurasikirwa pachiyero zvinoratidzwa mitema mutsetse. Panyaya nokuvhara murayiro wenyu, zvichaita kuvimba kwako yakatarwa chipfuro kana iwe unogona kumirira kusvikira ikatengesa chiratidzo anopiwa.
Kana kuti kuisa ikatengesa hurongwa: ikatengesa kuti anoiswa apo chiratidzo chakapiwa ane dzvuku museve kakanongedza downwards. Panewo imwe museve yeyero kuti rinowanika panguva chinoratidza chati pazasi wokutengesera chati.
The Buy chiratidzo acharamba kuoneka apo kunonoka kubvongodzwa spearman_correlation chinozunguzirwa mutsetse michinjikwa (anowana pamusoro) kutsanya zvinofamba spearman_correlation. Asi haufaniri kuvimba ichi sezvo chiratidzo anopiwa panguva diki pashure kana muitiro akatsinhira.
Akariyanika hurongwa, unofanirawo isa kumisa kurasikirwa pachiyero zvinoratidzwa dzvuku mutsetse. Panyaya nokuvhara murayiro wenyu, zvichaita kuvimba kwako yakatarwa chipfuro kana iwe unogona kumirira kusvikira Utenge chiratidzo anopiwa.
Muenzaniso vakagovera zvakaenda.
Pirson And Spearman kuwirirana Forex chokukomborerwa ari Metatrader 4 (MT4) paakati uye musimboti wacho Forex chinoratidza ndiko zvokuchinja vaunganidza nhoroondo date.
Pirson And Spearman kuwirirana Forex chokukomborerwa inopa mukana kuona peculiarities siyana uye mapatani mu mutengo emuchina izvo usingaonekwi chinoabatsira.
How yokugadza Pirson And Spearman kuwirirana Forex Indicator.mq4?
Download Pirson And Spearman kuwirirana Forex Indicator.mq4
Copy Pirson And Spearman kuwirirana Forex Indicator.mq4 yenyu Metatrader Directory / nyanzvi / zviratidzi /
Right watinya musi Pirson And Spearman kuwirirana Forex Indicator.mq4
Chakarurama Pirson And Spearman kuwirirana Forex Indicator.mq4 rinowanika Chart yako
How kubvisa Pirson And Spearman kuwirirana Forex Indicator.mq4 kubva Metatrader yako 4 chati?
Pirson And Spearman kuwirirana
Previous nyayaCash Extreme Forex chakarurama
inoteveraXmaster Formula Forex chakarurama